Wafti dowladda Puntland katirsan oo u dhoofay dalka Jabbuuti, kana qaybgali doona shir looga hadlayo joojinta tahriibta. – Radio Daljir
Janaayo 30, 2012 12:00 b 0
Bosaso,Jan 30 – Wafdi ka socda dawladda Puntland, kana kala tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha, amniga, caafimaadka, dekedaha iyo howlaha guud ayaa maanta u dhoofay dalka Jabbuuti si ay uga qaybgalaan shir uu soo qabanqaabiyay ururka muhaajiriinta caalamka ee IOM.
Wasiir ku-xigeenka labaad ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Col. Cabdi Yaasiin oo ka mid ah wafdigaasi ayaa waraysi kooban uu siiyay Radio Daljir ka hor inta aysan ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso (Bander Qasim Airport), ayaa waxaa uu sheegay inay dalka Jabbuuti uga qaybgali doonaan shir looga hadlayo arrimaha tahriibta iyo sidii xiriir wanaagsan ay u yeelan lahaayeen wasaaradaha Puntland iyo ururka IOM.
Waxaa uu sidoo kale sheegay shirka ay ka qaybagalayaan inuu furmi doono 1-da bisha Febraayo ee socota iyadoona uu socon muddo afar maalmood ah.
Arrimaha ugu waawayn ee shirka looga hadlayo ayaa ah sidii dowladda Puntland iyo IOM ay isaga kaashan lahaayeen, wax u qabashada dadka kasoo cararaya rabshadaha ka jira dalka Yemen ee soo gaaraya deegaanada Puntland iyo ka hortagista dadka tahriibayaasha ah ee nafsadooda ku haligaya badaha u dhaxeeya Yemen iyo Puntland.
Shirka ayaa muddada uu socdo si weyn loogu lafa-guri doonaa sidii xal buuxa loogu heli mushkiladda muhaajiriinta, iyadoo la filayo in laga soo saaro nuxur-murtiyeed xambaarsan xakamaynta arrinkaasi.
Daljir Boosaaso. http://daljir.com/
Dowladda Puntland oo joojisay dhismaha golaha deegaanka ee degmada Ufeyn
Baahin: Axad, Jan 29, C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Mashruuc balaarin & dayactir ah oo ka bilawday dekeda Bossaso; Wasiirada caddaalada, caafimaadka & deegaanka ee Puntland oo booqday dhaawaca dagaalladii Buuhoodle, guddoomeyna gargaar ka yimid jaaliyada Denmark; Ururka suxufiyiinta Somaliya ee NUSOJ oo dhalleeceeyey dilka Agaasimihii idaacada Shabeelle; Ciyaaraha gobollada Puntland oo bilaaban doona 1-da bisha Febraayo.